गैरजिम्मेवार, लोलुप मिडियाद्वारा परिचालित विश्वव्यापी त्रास – Word of Truth, Nepal
“ब्यूबोनिक महामारीले प्रहार भएको भान हुन्छ हामीलाई, तर होइन। विश्वव्यापी त्रासको केन्द्रमा रहेको कोभीड-१९ भाइरस एउटा कोरोनाभाइरस हो। यो इन्फ्लूएञ्जासित मिल्दोजुल्दो स्वासप्रश्वास प्रणालीसित सम्बन्धित एउटा सरुवा भाइरस हो। यसले कतिलाई मार्छ, प्राय:जसो कमजोर स्वास्थ्य भएका ७० वर्ष नाघेका वृद्धाहरूलाई। तर मरिजाने यस संसारलाई फराकिलो नजर लाएर हेर्ने हो भने यो भाइरस खास त्यति घातक छैन।” यसद्वारा सङ्क्रमित बहुसङ्ख्यक व्यक्तिमा धेरथोर फ्लूका लक्षण देखा पर्छन् र त्यसपछि उनीहरूको जीवन सामान्य रूपले अगाडि बढ्छ। मृत्यु दर १-२% छ। (डायमन्ड प्रीन्सेसमा मृत्यु दर १% थियो र मर्ने जति ७० वर्ष नाघेका थिए भने निष्पक्ष तथ्याङ्कको देश दक्षिण कोरियामा मृत्यु दर ०.६% छ।) भ्यान्डरबिल्ट विश्वविद्यालय स्कूल अफ मेडिसीनका प्रीभेन्टिभ मेडिसीन र सङ्क्रमक रोग सम्बन्धी प्राध्यापक विलियम शाफ्नरको चेताउनी छ, “अहिले एउटा ठूलो प्रकोप चलिरहेको छ, कोरोनाभाइरसको [नभएर त्यसको] चिन्ताको।”
(“कोरोनाभाइरस सम्बन्धित प्रारम्भिक मृत्यु दरहरू सम्भवत: भ्रमात्मक छन्,” एबीसी न्यूज, मार्च ९, २०२०)। यस विषयलाई यथार्थ रूप दिने हो भने हामी यो निबर्सौं कि कोभीड-१९ द्वारा केही हजार मेरका छन् भने अन्य कुराले दसौं लाख मरेका छन्। प्रत्येक वर्ष ३० लाख जति अमेरिकीहरू विभिन्न कारण मर्छन् भने संसारमा ५ करोड ६० लाख मर्छन्। विचार गर्नुहोस्, दसौं लाख। अमेरिकामा मृत्युका प्रमुख कारण निम्न क्रमअनुसार छन्: हृदय रोग, क्यान्सर, दुर्घटनाहरू, तल्लो स्वासप्रश्वास प्रणालीसित सम्बन्धित रोगहरू, स्ट्रोक, अल्ज्हाइमरस् र मधुमेह। यी हुन् प्रथम सात कारकहरू। नम्बर ८ स्थानमा रहेको छ इन्फ्लूएञ्जा (फ्लू) र निमोनिया। गत वर्ष फ्लू लागेर ३९ हजार जति अमेरिकीहरू मेर। विश्वभरिमा वर्षेनी फ्लू लागेर २००,००० जति मान्छे मर्छन्। ती मृत्युलाई छिनछिनमा अवगत गराउने, लाल-सङ्केतले पिछा गर्ने तालिकाहरू खोइ कहाँ छन् त? भन्नुपर्दा, हप्ताको सातै दिन चौबीसै घण्टा डरैडरको व्यापार गर्न तल्लीन गैरजिम्मेवार मिडिया तत्त्वहरू र सर्वव्यापी सामाजिक सञ्जाल मिडियाले यो पागलपन फैलाउनमा एउटा भूमिका खेलेको छ। संसारको ७०% लाई कोभीड-१९ लाग्नेछ भनेर सावधानीहरू जारी गरिँदैछन्; २०% अमेरिकीहरू मर्न सक्छन् अरे; यो चीनबाट उम्केको जीव-अस्त्र हो अरे; ट्रम्प झूट बोल्दैछन् अरे…। कुवैद्यहरू र मूर्खहरू उन्मादमा छन्। सबका सब विशेषज्ञ बनेका छन्।
सूचनाको मसित अझ उत्तम स्रोत छ। भविष्य सम्बन्धी विश्वकै सबभन्दा आधिकारिक पुस्तकले हामीलाई यो जनाउँछ कि साँच्चीकै ठूलाठूला महामारीहरू आउनेवाला छन्। एउटा सात वर्षको अवधि आउँदैछ जुनचाहिँ ख्रीष्ट आफ्‍नो राज्य स्थापना गर्नलाई फर्कनु अगाडि हुनेछ जुनबेला अरबौं मानिसहरू मर्नेछन्। यी कुराको बारेमा हामी प्रकाशको पुस्तकमा पढ्छौं। “मैले हेरें, अनि हेर — एउटा पहेंलो घोडा; अनि त्यसमाथि बस्नेको नाम मृत्यु थियो, अनि नरकचाहिँ त्यसको पछि-पछि लाग्यो। अनि तरवारले, अनिकालले, मृत्युले र पृथ्वीका जङ्गली पशुहरूद्वारा मार्न भनी पृथ्वीको चौथो भागमाथि तिनीहरूलाई अधिकार दिइयो” (प्रकाश ६:८)।
मृत्यको सवालमा भन्नुपर्दा, न्यून मृत्यु दरको एउटा फ्लू भाइरसले कैयौंलाई भयभीत पारेको तथ्यले मानिसहरू मर्नदेखि एकदमै डराउँछन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। अनि CNN, MSNBC, FoxNews, BBC, UPI, Yahoo, Bloomberg आदिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चेताउनी दिइरहेका छैनन् जोचाहिँ यो हो कि “मानिसहरूका निम्ति एकपल्ट मरण र त्यसपछि न्याय नियुक्त गरिएको छ” (हिब्रू ९:२७), अनि तिनीहरूले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचना दिइरहेका छैनन् अर्थात् कसरी अनन्त दण्डबाट बच्न सकिन्छ। यदि तपाईं मर्न तयार हुनुहुन्न भने, तपाईं त तयार हुनुपर्‍यो, किनकि मृत्यु दर त १००% छ! विश्वकै सबैभन्दा आधिकारिक इतिहासको पुस्तकअनुसार नमरीकनै यस संसारलाई छोड्नेहरू केवल दुईजना थिए अर्थात् हनोक र एलिया जसका विशेष परिस्थितिहरूमा परमेश्वरकै व्यक्तिगत हात रहेको थियो। त्यही पुस्तकले हामीलाई मृत्युको सारभूत कारण बताउँछ अनि त्यो चाहिँ कोभीड-१९ होइन। त्यो पाप हो, अनि सबै नै पापी छन्। त्यही पुस्तकमा असल खबर यो छ कि दयालु सृष्टिकर्ताले आफ्‍नो पुत्रलाई संसारको मुक्तिदाता हुनलाई पठाउनुभयो। “किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो; तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदानचाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो” (रोमी ६:२३)।
साभार: Friday Church News Notes, March 13, 2020, www.wayoflife.org fbns@wayoflife.org, 866-295-414
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2020/03/fusion-medical-animation-EAgGqOiDDMg-unsplash-scaled.jpg 1440 2560 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-03-19 16:13:222020-10-23 16:52:18गैरजिम्मेवार, लोलुप मिडियाद्वारा परिचालित विश्वव्यापी त्रास
गर्भपतन कोरोनाभाइरसका असल र अनौठा ख�...